October 19, 2020 - Padaethar
ကိုယ့် ချစ်သူ နဲ့အတူရှိနေတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ဒီလိုလေးတွေလုပ်လိုက်ပါ…
October 19, 2020 by Padaethar
ကိုယ့် ချစ်သူ နဲ့အတူရှိနေတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ဒီလိုလေး အချိန်ဖြုန်း ပါ… (1) သူ့ရဲ့လည်ပင်း လေးက်ို ရှေ့သွားလေးနဲ့ သာသာလေး ကိုက်ကြည့်ပါ။ (2) သူ့ ရင်ခွင် ထဲမှာ မှီရင်း စကားလေးတွေ ပြောပါ။ရံဖန်ရံခါ မကြာခဏ ဖက်ဖက်ထားပေးပါ။ (3) မိန်းကလေး ဖြစ်ပါက က်ိုယ့် Bf ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်ပါ။ ယောက်ျားလေး ဆိုပါက ကိုယ့် Gf ကို ပွေ့ချီကြည့်ပါ။ (4) သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အတင်းပြောပါ။ ပျော်စရာကောင်းသလ်ို Best Fri တွေလိုလဲ ဖြစ်လို့ရတာပေါ့။ (5) အသည်းယား လာရင် တွေ့တဲ့နေရာ ကိုက်ပစ်ပါ။(လက်မောင်း တို့ ဘာတို့ကိုပြောတာ ) သူ နာလို့ မျက်နှာ မဲ့သွားပါက ပါး … Read more
ကောင်လေး တွေ သဝန်တိုလာရင် လုပ်တတ်တဲ့ အရာ ( ၆) ခု
တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ နှစ်လုံးစားရင် သင်ဘာတွေထူးခြားလာမလဲ…
တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ နှစ်လုံးစားရင် သင်ဘာတွေထူးခြားလာမလဲ ကြက်ဥ ရဲ့အထောက်ကူပြုပုံတွေကို လူတွေခဏခဏမေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်နေ့နှစ်လုံးစားပေးရုံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကြက်ဥရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုပြောပြပါမယ်။ ( ၁ ) မှတ်ဥာဏ်တွေကောင်းလာမယ် တစ်နေ့ကိုကြက်ဥနှစ်လုံးစားပေးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ လုံလောက်တဲ့အာဟာရတွေရရှိပြီး Choline ဓာတ်တွေပိုများလာကာ မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေပါတယ်။ ( ၂ ) မျက်လုံးအားပိုကောင်းလာမယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အသစ်များအရ ကြက်ဥစားပေးခြင်းဟာ Lutein ဓာတ်ပိုမိုကြွဝစေတယ်လို့သိရပါတယ်။မျက်လုံးကိုအမြင်ကြည်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။မျက်လုံးမှုန်ခြင်း..၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်းတို့ကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ ( ၃ )အသားရေ၊ ဆံသားနဲ့အသည်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင် ဘိုင်အိုတင်း၊ဗီတာမင် B12 တို့ပါဝင်ကာ အစာခြေစနစ်တို့ကိုကောင်းမွန်စေပြီး အသားရေနဲ့ဆံသားတွေကိုလည်းကျန်းမာစေပါတယ်။ Phospholipids ပါဝင်တာကြောင့်အသည်းအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် အဆိပ်တွေကိုသုတ်သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ( ၄ ) ဝိတ်တွေကျလာမယ် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင် များပြောစကားအရ ကြက်ဥ မှာ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့်မနက်စာအနေနဲ့ ကြက်ဥပြုတ်စားပေးမယ်ဆို ဝိတ်ကျတာပိုမြန်မယ်လို့သိရပါတယ်။ အစားစာချင်စိတ်ကိုလည်း … Read more
အမျိုးသမီး တွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု ရုပ်ရည်က အရေးကြီးသလားလို့ ချစ်သူရှာချင်တဲ့အမျိုးသားတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ထက်အရပ်ပုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတာကို စာဖတ်သူ ဘယ်နှကြိမ်လောက် မြင်ဖူးသလဲ။ တွေ့လေ့တွေ့ထရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။သည်လိုပြောလို့ ရုပ်ရည်ရူပကာက လုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောမောလို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နည်းနည်းလောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောလို့ မိန်းကလေးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ အဓိကမကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့…. ၁. အမျိုးသမီးတွေဟာ အဆင့်အတန်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် အဆင့်အတန်းဆိုလို့ အပျံစားကားကြီး စီးနိုင်တာ၊ နာမည်ကြီးတာတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဆင့်အတန်းမြင့်မှုကို ဆိုလိုတာပါ။ လူမှုရေးအဆင့်မြင့်တဲ့အမျိုးသားတွေကို … Read more
ကွျောငွာ ဘုရငျမ ထကျထကျမိုးဦး ဖဘေု့တျလောကကို သိမျးပိုကျဖို့ ပွနျလာပွီ
ကြော်ငြာ ဘုရင်မ ထက်ထက်မိုးဦး ဖေ့ဘုတ်လောကကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ပြန်လာပြီ ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ Trend အရ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းများကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လုပ်ငန်း တော်တော်များများဟာ အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းချလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်း တချို့က လူသိများ ကျော်ကြားသူများကို သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချပေးရန် ငှားရမ်းတာကြမျိုး ရှိကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ လတ်တလော ရေပန်းစားနေတာကတော့ စိန်ထည်၊ ရွှေထည်များကို အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီး …. အနုပညာရှင်များစွာထဲမှာမှ ရောင်းအားကောင်းပြီး ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေတာကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ ဟိုအရင် ကြော်ငြာတခေတ်မှာလည်း နာမည်တလုံးနဲ့ အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့သလို သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှု အရှိန်အဝါကတော့ အခုအချိန်ထိ သူ့ရဲ့ပရိသတ်များကို လွှမ်းမိုးထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ထက်ကို အရင်က ကြော်ငြာခေတ်မှာ အားပေးကြသလို … Read more
ငွေဝင်ခါနီးပြီးဆိုရင် မက်လေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ် အိမ်မက် (၇) မျိုး
ငွေဝင်ခါနီးပြီးဆိုရင် မက်လေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ် အိမ်မက် (၇) မျိုး အိမ်မက် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေ ကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို အိမ်မက်မျိုးတွေ မက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကို ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ နို့ (ဒါမှမဟုတ်) ပျားရည်” အိမ်မက်ထဲမှာ နို့ တွေကို မက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည် ကို … Read more
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်တဲ့သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း
October 20, 2020 October 19, 2020 by Padaethar